Ukungenelela kwePanSALB ngezinsiza zokugwema ukusabalala kwe COVID-19 – PanSALB
Ukungenelela kwePanSALB ngezinsiza zokugwema ukusabalala kwe COVID-19
Emva kwesimemezelo sikaMongameli uRamaphosa ngeSonto mhla ziyi-15 kuMashi kunyaka wezi-2020 sokuthi igciwane iKhorona (COVID-19) siyinhlekelele yezwe, iBhodi Lezilimi Kuzwelonke (iPanSALB) libe nokukhathazeka mayelana nolwazi olutholakala kuphela ngolimi lwesiNgisi. Ngakho-ke emizameni yokunqanda ukusabalala kwaleligciwane, kumele siqinisekise ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bayaluthola ulwazi lokuzivikela kanye nezindlela zokuphepha ngolimi abaluqondayo. IBhodi Lezilimi Kuzwelonke lizinikele ekuhumusheni lonke ulwazi olumayelana nokuqubuka kweCOVID-19.
Lokhu kuyimizamo yokuqinisekisa ukuthi akekho umuntu ocwaswayo ekutholeni ulwazi ngolimi lwakhe.
Yingakho lesisikhungo sesikhiphe izihumusho sesimemezelo sikaMongameli Cyril Ramaphosa ezinkundleni zaso zokuxhumana mayelana nokumiswa kwezokuvakasha kanye nezindlela zokuqinisekisa ukuthi bonke abantu baseNingizimi Afrika bathola ulwazi ngezilimi abaziqondayo. IPanSALB isihlanganise ithimba labasebenzi bolimi ukuba bahlale belindele ukuhumusha yonke imiyalezo okufanele iye emphakathini, kubalwa nevidiyo yoLimi Lwezimpawu Lwase Ningizimu Afrika eyenzelwe umphakathi ongezwa ezindlebeni. Sixhumane nabo bonke esisebenzisana nabo njenge National Film & Video foundation ukuqinisekisa ukuthi imiyalezo yezimpendulo zikahulumeni ifinyelela kuyona yonke imiphakathi ngokwahlukana kwezilimi zayo
“Lolu ubhubhane lomhlaba wonke olusithinta sonke, kubalulekile ukuthi sixhumane nabantu ngezilimi abaziqondayo” kusho iBamba-Mphathi lePanSALB uDkt. Tebogo David Maahlamela. Wengeze ngokuthi abantu kufanele bathole ulwazi ngolimi lwabo lwebele ukuze kugwenywe ukuphambaniswa komyalezo othunyelwa uhulumeni nokungabhebhezela ukusabalala kwegciwane. “Lesi isikhathi sokusebenzisana ukuqinisekisa ukuthi siyazivikela kanye nalabo abaseduze kwethu ukuze sinciphise ingcuphe yokutheleleka ngokunikela ngolwazi esinalo ukugwema ukusabalala kwegciwane” kuphetha uDkt Maahlamela. Izihumusho zesimemezelo sikaMongameli zizokhishwa eziFundazweni ezehlukene futhi ziyatholakala ezinkundleni zokuxhumana zePanSALB njengo Facebook: @pansalb, Twitter: @pansalb, Instagram: pansalb_za